Soo qaado Peter Servold's Paleo Cuntada Cuntada BILAASH ah - Dib-u-Celinta Fudud
Home » Book » Hel buugga Cuntada ee Paleo Peter Peter ee Cuntada BILAASH ah
Waqtiga xaddidan oo keliya, Peter Servold wuxuu bixiyaa buugiisa cusub ee Paleo oo la yiraahdo Paleo Eats bilaash ah!
Paleo Eats ayaa leh waxyaabo gaar ah oo la kariyey. Paleo Eats waxaa loo qoray Paleo oo raadinaya cuntooyin cusub iyo mid gaar ah. Cuntada barafaysan ee Paleo ee ku jira buuggan bilaashka ah waa mid sahlan oo sahlan in la sameeyo. Cuntooyinka badankood waxaad samayn kartaa daqiiqado 30.
Waa kuwan qaar ka mid ah cuntooyinka aad sameyn kartid:
The Paleo Eats cunto karis wuxuu isku daraa wadarta quraacda quruxda badan ee XAUMX dufanka quraacda ee Paleo. Buuggu waa buug dhab ah oo aan ahayn koobi digital ah oo aad soo dejiso. Paleo Eats waa gabi ahaanba BILAASH oo kaliya waa inaad bixisaa kharash yar oo maraakiibta. Buugani wuxuu noqon doonaa BILAASHO waqti xaddidan oo kaliya Peter oo kaliya ayaa leh xaddi xaddidan oo nuqul ah si aad u hubiso inaad hesho intaad awooddo. Riix hoose si aad u hesho koobigaaga
Haddii aad raadineysid cuntooyinka macmacaanka Paleo, hubi inaad soo qaadato nuqul ka mid ah buug-gacmeedka macmacaanka ah ee KELIIS Ale ee Cuntada Dheeriga ah ee Paleo http://www.paleosweetsbook.com
Wax walbaa laguma soo celin doono Paleo Eats ee Bisha Cas ee Paleo Cookbook. Waxa aad ku dhammaynayso bixinta marka aad hesho buuggu waa hal mar oo lacag lagaa qaado. Buug-gacmeedka Paleo waa run ahaantii 100% bilaash ah, waana Pete habka loo soo dhaweynayo buug-gacmeedka Paleo. Fadlan ogow websaydhkan waxaa laga yaabaa inuu helo magdhow wixii iibsi ah ee laga soo iibsaday xiriiriyeyaal fadlan eeg bogga Siyaasadda Qarsoodiga wixii macluumaad dheeraad ah ..